के हो ‘अष्टिम्की’ ! कसरी मनाइन्छ अष्टिम्की पर्व – Dangisharan Khabar
के हो ‘अष्टिम्की’ ! कसरी मनाइन्छ अष्टिम्की पर्व
दंगीशरण खबर २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९
थारु समुदायका आफ्नै मौलिक भेषभुषा, कला, संस्कृति संगसंगै विभिन्न पर्वहरु पनि फरक र रोचक रुपमा पाइन्छ । यी समुदायका विभिन्न चाडपर्व संगसंगै अष्टिम्की पर्व पनि एक महत्पूर्ण पर्व हो । खासगरि महिलाहरुले मात्र मनाइने पर्व हो ‘अष्टिम्की’ । कृष्णा अष्टमकीको दिन मनाइने पर्वलाई थारु भाषामा ‘अष्टिम्की’ भनिन्छ । अष्टिम्कीको उत्पत्ति ‘अष्टमींटिको लगाउनु’ बाट भएको थारु सस्कृतविद अशोक थारुको भनाइरहेको छ । अष्टिम्की’ अर्थ भाद्र महिनाको अष्टमी तिथिमा श्रीकृष्ण अर्थात ‘कान्हा’ जन्मेकाले उनलाई टिको लगाउनु हो । ‘कान्हा’को जन्मदिनलाई थारु महिलाहरुले ‘अष्टिम्की’ को रुपमा व्रत उपबासका साथै उनको जीवनी चित्रनमा भित्ते चित्र कोरेर धुमधामसंग टिका, फलफूल, अर्पण तथा दीप प्रज्वलन गरि जलले मनाउने गर्दछन् । ‘अष्टिम्की’ पर्व खासगरि दाङ, वाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लाका थारु समुदायका महिलाहरुले उल्लासमय वातावरणमा मनाउदै आएकाछन । स–सानो १०/११ बर्षको बच्चा देखि लिएर ६०/६५ वर्षको वृद्ध महिलाहरुले यो पर्व मनाउदै आएको पाइन्छ ।
‘अष्टिम्की’ तयारी कहिलेदेखि
‘अष्टिम्की’ आउने एकडेढ हप्ता अगाडीदेखि थारु महिलाहरुले ‘अष्टिम्की’को तयारीमा जुटेका हुन्छन् । थारु महिलाहरुको सवै भन्दा महान पर्व भएकोले त्यसदिनमा विशेष गरि नया कपडा (रातो, कालो चोली, सेतो गुन्यु), विभिन्न थरथरिका गहनाको तयारी गर्ने गर्छन । यसरी कपडा गरगहना तयारी गरिसकेपछि ‘अष्टिम्की’को अघिल्लो रात दर खानको लागि माछा मार्ने, घोङघी खोज्न जाने गर्दछन् । अष्टिम्कीमा विशेषगरि थारु महिलाहरु ले घोङघी र माछा संग दर खाने गर्दछन । त्यसैसंग मासु अन्य मिठो मिठो परिकारको लागि पनि तयारी गर्नेगदर्छन । त्यसैगरि चित्र बनाउको लागि विभिन्न थरिको रंग, चुन, गोवर माटो, चित्र कोर्नको लागि वाँसको व्रस, आदि जुटाउने गर्दछन् । त्यस्तै पकाउनको लागि दउरा, अग्रसान ‘कोसेली’ दिन जान सालको पात टिपेर टपरी लगाउने, घर सरफाई गर्ने लगायत कामको तयारी गरेकाहुन्छन् ।
‘अष्टिम्की’ मा चित्र कोरिन्छ
‘अष्टिम्की’को पूजा गर्नको लागि महटावा घरको वैठक (बह्री) कोठा लाई उपयुक्त मान्दछन । त्योदिन वैठक कोठा विहानै लिपपोट गरेर सफा गरिन्छ । र त्यहि वैठक कोठाको उत्तर पत्तिको भित्ता या ‘डेह्री’मा चतुर्भुज आकारमा बनाई गोवर माटोले लिपपोट गरिसकेपछि त्यसलाई सेतो चुनले पोटिन्छ भने त्यसको छेउमा छेउमा विभिन्न थरिको रंगी चंगी रंगले चारैतिर पोटीसकेपछि त्यसैको विचमा सवैभन्दा माथि पाँच जनाको चित्र वनाइन्छ । त्यहि सवै भन्दा विचको चित्रलाई श्रीकृष्णको चित्र हुन्छ । ‘अष्टिमी’को दिन श्रीकृष्णलाई हिरो वनाइन्छ । किनकी अष्टिम्कीको दिन श्री कृष्ण अर्थात ‘कान्हा’को पूजा गरिन्छ । यसरी श्री कृष्णको दाँया सुर्य र बाँया चन्द्रमाको चित्र कोरिन्छ । त्यसैगरि दोस्रो लाईनमा सात जना मान्छेको चित्र कोरिन्छ । जहाँ सात भाई कौरबको प्रतिनीतित्व हुन्छ । यसैगरि तलको भागमा दुलाहा दुलही, दुलहीलाई पठाउन जान लागेको ‘डोली’, दुलाहालाई पठाउन जानलागेको ‘ड्वाला’ माछा, गंगुता, बाघ, हात्ति, मयुर, सर्प, गाई, बल्ला, विराले,बनजंगल, विभिन्न चरा, चरिंगी, जनावर, विच्छी लगायतको चित्र बनाइन्छ ।
कसरी पुज्छन ‘अष्टिम्की’ मा पूजा
‘अष्टिम्की’ अघिल्लो रातमा दर खाइसकेपछि ‘अष्टिम्की’को दिन थारु महिलाहरु दिनभरि व्रत वस्छन् । त्यसैगरि अष्टिम्कीकै दिन ‘अष्टिम्की’को चित्र वनाउको लागि पुरुष मान्छे पनि व्रत वसेका हुन्छन् । यसरी यो दिन थारु महिलाहरुले दिउसो ११/१२ बजेतिर नुहाइधुवाई गरि अष्टिम्कीमा पूजा गर्नको लागि विभिन्न थरिको फूल, ज्यामिर, दियो बाल्नको कपासको बत्ति, माटाको दियो, सालको पातको टपरी बनाउने तयारी गर्छन भने पुरुष मान्छले अष्टिम्कीको चित्र बनाउन तिर लाग्छन । अष्टिम्कीको चित्र बनाउनको लागि थारु महिलाहरुले पनि सहयोग गर्ने गर्दछन् । यसरी चित्र वनाइसकेपछि बेलुका अर्थात साझ ७÷८ वजेतिर गाँउका सवै थारु महिलाहरुले आ–आफ्नो घरबाट टपरीमा थोरै चामल, दियो, फुल, ज्यामिर, लिएर लाइबद्ध रुपमा महटावाको घरमा जाने गर्दछन । त्यहाँ गाँउका सवै थारु महिलाहरु जुटीसकेपछि महटावाको श्रीमतिले सवै भन्दा अगाडी पूजा गर्नसुरुवाट गर्छन । यसरी महटावाको श्रीमतिले पूजा गरिसकेपछि गाँउको ठूलाबाट क्रमस सानोले पूजा आजा गर्नगर्दछन । पूजा गर्ने बेला श्रीकृष्णलाई सवै भन्दा अगाडी सेन्दुरले टिक्ने गर्छन अर्थात श्री कृष्णलाई टिका लगाइसकेपछि भित्तामा कोरिएको अन्य सवैचित्रमा क्रमस टिका लगाउने र टिका लगाइसकेपछि तीन या पाँच चोटी जल चढाउने सुरु गरिन्छ । त्यहिक्रममा अष्टिम्कीको गित पनि गाइन्छ । यसरी गाँउका सवैले पूजा गरिसकेपछि सवैले आ–आफ्नो घरमा गएर दहि, फलफुल, खाइसकेपछि पुन महटवाको घरमा गई रातभरि सामुहिकमा ‘अष्टिम्की’को गीत गाइन्छ । अष्टिम्कीमा यसप्रकारको गीत हुन्छ ।
यसरी रातभरि गीत गाइसकेपछि विहान ६ वजे गाँउभरिको सवै थारु महिलाहरुले आ–आफ्नो टपरीमा रहेको बलिरहेको दियो ‘दिप पज्वलन’, ज्यामिर, फूल लिएर लाइनबद्धमा नजिकैको खोलामा पुग्छन । खोलामा गइसकेपछि सवैले पानीमा गएर लाइन लागेर बलिरहेको दियो ‘दीप पज्वलन’, ज्यामिर, फूल एकसाथ वगाउने गर्छन । भने यता पछाडी पुरुषहरु लंगी लुटनकोलागि खोलामा पर्खिरहेका हुन्छन । त्यो दिन वगाएको ज्यामिर धेरै मिठो हुने गरेको थारु जानकारहरु वताउछन् । यसरी थारु महिलाहरुले बलिरहेका दियो ‘दीप पज्वलन’, लंगी, फूल वगाई सकेपछि सवैले नुहाई धुवाइगरि आ–आफ्नो घरमा जन्छन । घरमा आइसकेपछि उनिहरु हिजैकै दिन जस्तै भात, तीन थरिको तरकारी, अन्य मिठा मिठा परिकार आ–आफ्नो दाजुभाइको नाममा निकल्ने (कहार्ने) गर्छन जलसालई थारु भाषामा अग्रसान भन्ने गरिन्छ । त्यहि अग्रसान विवाहित महिलाहरुको दाजुभाई छनभने आ–आफ्नो दाजुभाईहरुलाई अग्रसान दिन जाने चलन छ भने अविवाहित गाँउका महिला अर्थात (वठिन्या) हरु एकठाउमा जम्मा भएर जात्रा (लाखे) हर्न जान्छन ।
वर्षको एक चोटी आउने महान पर्व अष्टिम्कीलाई थारु समुदायका महिलाहरु धुमधामसंग मनाउने गर्दछन । यो पर्व मनाउन पाउने थारु महिलाहरुको आफ्नो लागि ठुलो खुशी र स्वतन्त्रताको दिन पनि मान्नेगर्दछन । सधैभरि घरको काममा व्यस्तता रहने थारु महिलाहरु अष्टिम्कीको दिन भने कुनै पनि काम गर्नुपर्दैन सवै काम पुरुषले गदिर्ने गरेकोले उनिहरु स्वतन्त्रताको दिन मान्नेगरेको हुन ।
Posted in Uncategorized, कला/संस्कृति, नयाँ पुस्ता, ब्यानर, विचार/ब्लग, विविध
माना बोक मुरी भिट्त्रैना ब्याला धानम भारी क्षति २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९
थारु समुदायको दशैं : सेतो टीका र मकैको जमरा २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९
मौरिपालक महासंघ दाङको अध्यक्षमा श्रेष्ठ २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९
दङाली युवा नेता मेटमणी चौधरी मन्त्री बन्दै २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९
रेशम चौधरीलाई छुटाउन थरुहट संघर्ष समिति ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारीमा २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९
डश्यक् सख्या गीत २७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:३९